Chaza ifuthe lokujolisa ekujoliseni iarhente yeditanium
Izinto ekujoliswe kuzo zinoluhlu olubanzi lwezicelo kunye nendawo enkulu yophuhliso lwentengiso. Ukusebenza okuphezulu, Isisombululo sokudambisa indalo esingqongileyo kunye nesinetyhefu esiveliswe ngokudityaniswa kwearhente yeditanium kunye neempawu zokwaleka kwePVD.
Due to its non-toxic and environmentally friendly characteristics, iarhente ye-detitanium ayinakuze yonakalise ipeyinti yokhuselo ye-electroplating kunye ne-substrate, kwaye ukhawuleze ucofe i-IP, enefuthe elifanelekileyo lokwahlula umbala..Ijolise ikakhulu kumzi-mveliso wokuhombisa we-ion kunye noTi, Kholwa, TiCN, Ti + SS, Wena + Kr, Zr, ZrCN, YIBA, ZRALN, iimveliso ezintsha ezityabeka iplasma yokufota.
In terms of electro-color separation in the ion decorative plating room, ibonakalise ukusebenza okugqwesileyo.Ukuba iindlela zokususa iifilimu zesiko zisebenzisa ii-asidi ezomeleleyo kunye nealkali, ziya kubangela umonakalo omkhulu kwipeyinti yokukhusela ekhethiweyo, kwaye kulula ukuvelisa into yokugqobeka kwepeyinti ekhuselayo kunye namazinyo enja, eziza kubangela iziphene ezininzi emva kokwahlulahlula umbala..Ifanelekile kuzo zonke iileya ezisezantsi kunye nemixube yentsimbi, ubhedu, ingxubevange, PNP, I-PCP, nickel, njl. Izinto ekujoliswe kuzo ezinokukwazi ukususa ifilimu ngokukhawuleza malunga nayo 1-2 imizuzu, kwaye ayiyityhefu, ngaphandle kwevumba, ayinambala kwaye iyabonakala, kwaye ayonakalisi umaleko ongaphantsi. Iimbonakalo, ngakumbi emva kwengubo ye-IP kwi-PNP, I-PCP, kwaye i-substrates zentsimbi zithathe umhlala-phantsi, inokucocwa ngqo eziko, Kwaye ke ukutyabeka IP kuyafakwa, kwaye indibaniselwano ilungile, akukho sidingo sokuphinda ubeke umbane kumaleko asezantsi.
Ngaphambili: I-tungsten yasekhaya
Okulandelayo: Izinto ezikumgangatho ophezulu zokutyabeka (4U-N